नेपाल आज | यी तीन भारतीय क्रिकेटर हुन्, जो शिखर धवनको स्थान लिन सक्छन्!
काठमाडौंः भातीय क्रिकेट टीम पछिल्लो समय खेलाडी चोटका कारण तनावमा छ । उसका महत्वपूर्ण खेलाडी शिखर धवन, भुवनेश्वर कुमार, ऋषभ पन्त, इशान्त शर्मा, दीपक चाहर लगायत चोटका कारण आराम गरिरहेका छन् । धवन, पन्त न्यूजिल्याण्डसँगको सिरिजका लागि टिममा परिसकेका छन् । तर, दुवै टीम अहिले घाइते भएकाले न्यूजिल्याण्ड ‘टूर’मा जाने–नजाने निश्चित भइसकेको छ ।
पन्तको सम्भावना भए पनि शिखर भने चोटका कारण न्यूजिल्याण्ड ‘टूर’ गुमाउने भारतीय मिडियाले जनाएका छन् । शिखरले ‘टूर’ गुमाए उनको स्थानमा अर्का खेलाडीलाई भारतले टीममा समावेश गर्ने छ । शिखरको स्थान कसले लिन सक्लान् त? यो प्रश्नको जवाफमा प्रमुख तीन नाम आउँछन्–
१. सञ्जु स्यामसनः भारतले न्यूजिल्याण्ड ‘टूर’का लागि टीम घोषणा गर्दा सञ्जु अटाएका थिएनन् । तर शिखर अष्ट्रेलिया विरुद्धको वानडे म्याचमा घाइते भएपछि भने न्यूजिल्याण्ड भ्रमणमा सञ्जुको सम्भावना बलियो बनेको छ । उनी घरेलु प्रतियोगितामा शानदार प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । विकेटकीपर–ब्याट्सम्यान सञ्जुले केही समयअघि विजय हजारे ट्रफी अन्तर्गत गोवाविरुद्ध अविजित २११ रन बनाएका थिए ।
२. मयंक अग्रवालः मयंक केही समययता अन्तर्राष्ट्रियसँगै घरेलु प्रतियोगितामा शानदार प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनले २०१९ मा टेष्ट क्रिकेटमा उत्कृष्ट ब्याटिङ गरेका थिए । मयंकले वानडे विश्वकपका लागि भारतीय टीममा पनि मौका पाएका थिए । यद्यपि उनले एउटा म्याच पनि खेल्न पाएनन् ।
मयंकले ८१ लिस्ट ‘ए’ म्याचमा ५०.११ को औसतमा ३ हजार ९ सय ९ रन बनाएका छन् । साथै उनले १३६ टी–२० खेलमा २ हजार ९ सय ६९ रन बनाएका छन् । लगातार उत्कृष्ट लयका कारण मयंकलाई भारतले शिखरको स्थानमा न्यूजिल्याण्ड लैजान सक्छ ।
३. पृथ्वी शाः शिखरको स्थान लिनसक्ने अर्का सम्भावित खेलाडी हुन् युवा ब्याट्सम्यान पृथ्वी शा । सानै उमेरमा उनले भारतीय क्रिकेटमा गतिलो छाप बनाएका छन् । पृथ्वीले लिस्ट ‘ए’ करियरमा २७ म्याचमा ४४.२५ को औसतमा ११ सय ९५ रन जोडेका छन् । साथै उनले ३८ टी–२० म्याचमा ९ सय ७२ रन पनि बनाइसकेका छन् ।
पृथ्वीले भारतका लागि टेष्टसमेत खेलिसकेका छन् । उनले पहिलो टेष्टमै शतक बनाएका थिए । वेष्ट इन्डिजविरुद्ध टेष्टमा डेब्यू गरेका पृथ्वीले १ सय ३४ रन बनाएका थिए । जहाँ उनी ‘म्यान अफ द म्याच’समेत चुनिएका थिए । केही दिनअघि मात्रै पृथ्वीले न्यूजिल्याण्ड–११ को टीमविरुद्ध १ सय बलमा १५० रन बनाएका थिए । शानदार लयमा देखिएका उनी शिखरको स्थान लिनसक्ने बलिया विकल्प हुन सक्छन् ।
भारतीय टीम ५ टी–२०, ३ वानडे र २ खेलको टेष्ट सिरिजका लागि केही दिनमै न्यूजिल्याण्ड ‘टूर’मा जाँदैछ । न्यूजिल्याण्ड भ्रमणमा शिखर पनि समावेश हुने सम्भावना कम छ । उनी अष्ट्रेलिया विरुद्धको वानडे सिरिजको अन्तिम खेलमा फिल्डिङका क्रममा घाइते भएका थिए ।
शिखर धवन भातीय क्रिकेट टीम भारतीय क्रिकेटर